दुबईबाट बिहानै काठमाडौं ओर्ले, साँझसम्म कलंकीकै अलपत्र ! « Drishti News – Nepalese News Portal
दुबईबाट बिहानै काठमाडौं ओर्ले, साँझसम्म कलंकीकै अलपत्र !
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार 6:45 am
काठमाडौं । दुबईबाट बिहीबार मात्रै काठमाडौं आइपुगेका मानबहादुर धानुक पनि कलंकीमै गाडी कुरेर बसेका थिए । उनी दुबईबाट बिहान मात्र काठमाडौं ओर्लेका थिए, एयरपोर्टबाट ट्याक्सीले ११ बजेतिर कलंकी पु¥याइदियो ।
पानी परेकाले ओत लागेर बसेका धानुकको भने कैलाली फर्किने कुनै टुंगो थिएन । उनीसँगै गाडी कुरेर बसेका अन्य सर्वसाधारण ट्रकमा झुन्डिएर गए, कैलालीसम्म जान गाडी नभेटिएकाले उनी बेलुकीसम्म सडकमै छन् । ‘उतैबाट काठमाडौं गाडी आएको छ रे, बेलुकासम्म आइपुग्यो भने त्यसमै जान्छु भन्ने आस छ,’ धानुकले भने । काठमाडौंमा आफन्त कोही नभएकाले बस्ने ठाउँ नभएको उनले बताए । भन्छन्, ‘नजिकै भए त लिफ्ट मागेरै या गाडीको पछाडि झुन्डिएरै भए नि जान्थे ।’
काठमाडौं उपत्यकामा मजदुरी गर्दै आएका भारतीय नागरिकहरू बढी समस्यामा परेका छन् । बुधबार रातिदेखि नै गाडी कुरेर बसेका कतिपय मजदुर अझै गाडी पाइने आशामा सडकमै छन् ।
कतिपय सर्वसाधारण भने बिहीबार पनि काठमाडौंबाट सवारी बाहिरिने आशामा १२÷१४ घन्टा सडकमा कुरिरहेका छन् । तीमध्ये हुन्, झापा जान गाडी कुरिरहेका यमुना गुरागाइँ र विनिता ओझा ।
उनीहरू गाडी पाइन्छ कि भन्ने आसमा बिहान ६ बजे नै कलंकी पुगेका थिए । ‘आज पनि गाडी जान्छ रे भनेर सुनेर आएको । गाडी आउँछ कि भनेर आस गरेर बसेका छौँ । बिहानै ट्याक्सीसमेत नपाएर सुन्धाराबाट बाइकमा लिफ्ट मागेर आएको ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।